एन्टार्कटिकामा पहिलो पटक पुग्यो एयरबसको विमान
काठमाडौँ । पहिलो पटक एयरबसको ए३४० विमान एन्टार्कटिकामा अवतरण गरेको छ । बुटिक एभियसन कम्पनि हाइ फ्लाईले एयरबसलाई पहिलो पटक एन्टार्कटिकामा लैजाने व्यवस्था मिलाएको हो ।
विश्वको दक्षिणी कन्टिनेन्टमा रहेको वोल्फ्स फांग नामको एडभेन्चर क्याम्पको रिसोर्टका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न यस पटक हाइ फ्लाईले एयरबसको विमान लिएर गएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको कप टाउनबाट उडान भरेको यस विमानलाई कप्तान कार्लोस मिरपुरीले उडाएका थिए । कप्तान कार्लोस हाइ फ्लाईक उपाध्यक्ष समेत हुन् ।
विमानले वान वे मा साढे ५ घण्टाको उडान भरेको र एन्टार्कटिकाको भूमिमा करिब ३ घण्टा विताएको बताइएको छ । विमानले २५ सय नटिकल माइलको दुरी कभर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
वोल्फ़ फांग रिसोर्टले सि-लेभल एयरपोर्टको डिजाइनमा बनाएको एयरपोर्टको ब्लू-आइस रनवे रहेको बताइएको छ । प्राविधिक रुपमा यो विमानस्थल नभएपनि विशेष तालिम प्राप्त पाइलटले यस्तो ठाउमा विमान अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ । यसै कारणले पनि अहिले एन्टार्कटिकामा पुगेको एयरबसको चर्चा विश्वभर भइरहेको छ ।
एन्टार्कटिकामा पहिलो उडान १९२८ मा लकहीड भेगा १ मोनोप्लेनले गरेको थियो । जसलाई अस्ट्रेलियाका आर्मीका पाइलट जर्ज हबर्ट विल्किन्सले उडाएका थिए ।
एन्टार्कटिकामा अहिलेसम्म विमानस्थल नभएपनि ५० भन्दा बढी विमान अवतरण गर्न सकिने रनवे आकारका ठाउ रहेको छ ।
अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रीकाको एन्टार्कटिकामा विशेष चासो विगतदेखि नै रहदै आएको छ ।
ह्वाइट कन्टिनेन्टको नामले परिचित एन्टार्कटिकामा अहिलेसम्म पानि जहाजबाट पर्यटक जाने गरिरहेकोमा एयरबसको यो विमान पुगेपछि पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह भने देखिएको छ । आउदा दिनमा यस्तै किसिमका विमान व्यावसायिक रुपमा एन्टार्कटिकामा जानसक्ने सम्भावनाको ढोका यस घटनाले खोलिदिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यौन सम्पर्कपछि भाइरस कमजोर हुन्छ भन्दै युवतीलाई निर्वस्त्र पार्ने चिकित्सक पक्राउ
रोम । इटालीका एक चिकित्सक महिला बिरामीलाई यौन सम्पर्क गर्न कर गर्ने क्रममा अर्धनग्न अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । ६० वर्षीय डा. जिओभियानी मिनिलो बिरामीसँग जबरजस्ती यौन सम्पर्क गर्न खोजेको
सडकभर डलर भेटिएपछि...
क्यालिफोर्निया । अमेरिकाको एउटा राजमार्गमा एउटा बख्तरबन्द गाडीबाट नोट झरेपछि टिप्नेको भिड लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । नोट खसेर राजमार्ग र वरपरको हावामा उड्न थालेपछि सर्वसाधारणले आफुले चलाएको गाडी नै
हार्दिक पाण्डेयले किने ५ करोडको घडी !
काठमाडौँ । भारतीय अलराउन्डर् क्रिकेटर हार्दिक पाण्डेयले किनेका दुइ घडी अहिले चर्चामा रहेका छन् । टी-२० विश्वकप सकेर भारत फर्किने क्रममा मुम्बईस्थित छत्रपति शिवाजी विमानस्थलमा पाण्डेयले दुबईबात किनेर ल्याएको ५ करोड
केरला । शिक्षा लिन उमेर बाधक हुँदैन । जोकोहीले पनि जुनसुकै बेला अध्ययन गर्न सक्छन्। र, यसको सफल उदाहरण बनेकी छन भारतकी एक बृद्धा । केरला राज्यकी १०४ वर्षीया कुट्टिआमले राज्यले